Iye zvino yawanikwa titanium bracelet yeApple Watch kubva kumugadziri Nomad | Ndinobva mac
Iye zvino yave kuwanikwa titanium bracelet yeApple Watch kubva kumugadziri Nomad
Apple Watch tambo dzave kuita huru kuita kune Cupertino-based kambani. Mwese pamwedzi mitatu kana zvakadaro, inoburitsa tambo nyowani yemabhande, anonyanya kugadzirwa nenylon. Asi handiyo chete inogadzira inoramba ichiburitsa mabhandi matsva. Mumwe wevanogadzira vanogadzira mumunda wezvinhu zveApple Watch ndiNomad.
Mavhiki mashoma apfuura, takakuzivisa nezve tambo yakasetwa yeApple Watch uye nenyaya yeAirPods iyo kambani iyi yainge yaratidza mune yakajeka brown ganda reganda. Nhasi tiri kutaura nezve tambo nyowani kubva kumugadziri uyu, tambo yekubatanidza yakagadzirwa ne titanium iyo yave kutowanikwa pamusika.
Iyi tambo nyowani yakagadzirirwa kuve yakajeka sezvinobvira apo ichirwisa, ichipa yakanyanya mhando mhedzisiro. Inoenderana nemawrist size kubva 135 kusvika 220mm. Iyo inoumbwa ne20 titanium zvinongedzo uye ndiyo tambo isingamiriri zvakanyanya iyo yatinogadzirwa nemugadziri uyu. Sekureva kwemugadziri, tambo iyi inogona kumira nemamiriro akasimba uye ichiri kutaridzika zvikuru nekuda kwehunhu hwekupedzisa.
Masimbi edu esimbi akagadzirwa kuti ave akareruka sezvinobvira, uku uchipa iwe chivimbo chepamusoro-soro simbi tambo. Tichitora mukana wehunhu hwemhando yepamusoro titanium, iyi ndiyo yedu yakasimba tambo kusvika zvino.
Iyo Titanium Bhendi kubva kumugadziri Nomad inowanikwa mune sirivheri uye nhema. Inosanganisira maturusi anodikanwa ekubvisa anosvika gumi ematanho ekugadzirisa iwo kune saizi yechiwoko chedu. Zvine musoro, inowirirana nezvose zvinyorwa zveApple Watch uye nehukuru hwese.
Tambo iyi inotengwa pamadhora 179,95 uye yatove kutowanikwa mune yepamutemo Nomad chitoro, kwatinogona kuwana kuburikidza neiyi inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iye zvino yave kuwanikwa titanium bracelet yeApple Watch kubva kumugadziri Nomad
Amazon inowana iyo yakasimba eero kuitira kuti ivandudze kudyidzana kweimba otomatiki
Tsvaga musangano wekutora mifananidzo, Art uye dhizaini, hutano nemitambo, zvirongwa, mimhanzi, nezvimwe muApple Store yako iri pedyo